Bulshadu waxay ku taageertaa ardayda qalin jabisay 115 deeq waxbarasho | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Bulshadu waxay ku taageertaa ardayda qalin jabisay 115 deeq waxbarasho
Maajo 11 , 2021
Waayeelka Dugsiga Sare ee Stillwater waxay heleen ku dhowaad nus malyuun doolar oo deeq waxbarasho ah. 64 deeq bixiyeyaal maxalli ah ayaa ardayda SAHS ugu deeqay 128 deeq waxbarasho. Sannadkan, 92 arday oo qalin jabisay ayaa la siiyay abaalmarino isku darka $ 422,050 sanadka ugu horeeya iyo deeqo dib loo cusbooneysiin karo (oo ay kujiraan deeqaha waxbarasho ee qaran.) Taas kuma jiraan deeqo waxbarasho oo laga helo shakhsiyaad kuliyado iyo jaamacado ah.
Qaar ka mid ah ardayda kulleejada waxaa laga yaabaa inaysan suurtagal ahayn taageeradaas la'aan. Kuwa kale, abaalmarintani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta culeyska sanadka koowaad ee kuleejka. Waad ku mahadsan tihiin dhamaan kooxaha bulshada deegaanka iyo shaqsiyaadka maalgashiga ku sameeyay qalin jabiyaasheena kuna taageeray sii wadida waxbarashadooda.
Ka daawo ku celiska xafladda Dooxada Helitaanka Dooxada ama eeg liistada deeqaha waxbarasho iyo kuwa qaata . Daawo video ah qaatayaasha deeqda waxbarasho ee Tozer Foundation.